Chakavanzika Kirasi Kugogodza! Thor Schrock Trouces Kushambadzira KweInternet Gurus
Thor Schrock Anokanda Internet Kushambadzira Gurus? Kupa $ 1,800 muCash neMubairo
Mugovera, December 8, 2007 Svondo, October 4, 2015 Thor Schrock
** Misoro kumusoro **
Verenga kusvika kumagumo mukana wekuhwina $ 1,000 CASH!
Doug uye vazhinji venyu makanditsigira pane Inotevera Internet Millionaire chaiyo inoratidza, uye kunyangwe ini ndaive wechipiri mumhanyi ndakave nemukana unotyisa wekudzidza kubva kune inoshamisa internet kushambadzira gurus mu Chakavanzika Kirasi.
Uye ini ndaive mudzidzi AKANAKA kwazvo. Saka zvakanaka zvekuti ndiri kutora vaviri vevaimbove varairidzi vadzidzisi, Marlon Sanders naArmand Morin kuenda kuhushedhi muJoel Comm's Chakavanzika Kirasi Yakabatana Chirongwa!
Izvi ndizvo zvandakadzidza uye nemabatiro andiri kuita vamwe vevatengesi vepamhepo vepasirese.
Iva Kushambadzira Ninja, kwete Kushambadzira Thug.
Marlon Sanders akandidzidzisa iyo dzidziso kuseri kwechimwe chinhu chandakajairira kuziva munguva yakapfuura. Akataura kuti simba rega rega rine kusasimba kunotevera. Kana iwe uchipesana nemukwikwidzi wepamusoro, haufanire kurwisa simba ravo. Iwe unoda kurwisa kushaya simba kunoenderana nesimba ravo.
Semuenzaniso, kana iwe uchikwira kunopesana neBest Buy kuyedza kutengesa makomputa, usavhure super shopu ine vashandi vane hunyanzvi hwekutengesa nevatsigiri vashandi uye hombe sarudzo dzePC.
Panzvimbo pezvo tengesa zvemhando yepamusoro makomputa ayo akajairwa zvakagadzirirwa zvido zvemushandisi uye nekupa iyo yekuhwina-sevhisi sevhisi uye chirongwa chekutsigira kuti chidzore. Nokurwisa kushaya simba mukati mesimba ravo, iwe unozvidza Best Buy yemakwikwi mukana.
Izvo Zvakawanda Zvinoputsika Ndiwe Uri Nani Mufananidzo Wako Unofanirwa Kuva
Masayiti akaita seAmazon, kana Google, kana Youtube ari mamirioni emadhora mawebhusaiti ane marogo ayo anozivikanwa nevashanyi uye vanhu vauya kuzovimba navo.
Armand Morin akanditsanangurira kuti hapana tsaona muchokwadi iwe unogona kufungidzira marogo emakambani ese ari pamusoro mupfungwa dzako izvozvi.
Nekudaro kana imwe yeaya mawebhusaiti ichida kuti iwe utore chiito, kunyangwe kutenga bhuku kana kurodha vhidhiyo, unokwanisa kutora danho iri nekuti unovimba kuti unovimba nezita uye logo.
Mutengo mukuru kwazvo waunowana mubhizinesi kuwana mutengi kekutanga. Sekondari kutengesa kune mumwe chete mutengi kunofanirwa kunge kuri keke yekufamba kana iwe wakaratidza mushe uye mutengi wako anokuziva iwe nguva inotevera yaunouya uchigogodza.
Kana Mufananidzo uri Mazwi chiuru, Chii chinonzi Vhidhiyo Kukosha?
Kushandisa vhidhiyo kutyaira traffic kuwebhusaiti yako fomu yehunyanzvi, uye kana iwe uchizviziva iwe unenge uine chishandiso chinoshanda kwazvo chinotariswa nevanhu vazhinji.
Chero ani zvake anogona kutumira backlink mumasekondi mashoma. Haisi biggie kupinda muGoogle Kutsvaga. Asi kutora vhidhiyo kutora imwe nguva uye imwe tarenda. Vazhinji vanhu havazive kutyaira traffic nemavhidhiyo, saka havasvibise nazvo zvachose.
Mike Koenigs Mike akandidzidzisa maitiro ekugadzira vhidhiyo, kuiwana pamberi pemaziso eziso, uyezve woendesa iwo eyeballs kune webhusaiti. Akandidzidzisa mashandisiro emavhidhiyo kutyaira traffic sezvinoita injini yekutsvaga, uye ichi chaive chinhu chikuru chakandifambisa pamusoro pevamwe vatengesi veguru.
Akatsanangura kuti vanhu vanozobvumidza yakaipa vhidhiyo kusvika padanho, asi kana odhiyo yako yakaipa, hauzopfuure apfuura maviri echipiri masekondi. Kana uchizoshandisa mari pazvigadzirwa, tenga maikorofoni yakanaka kutanga, wobva watora kamera yakanaka.
Ikozve kwaive ne $ 30 inofanirwa-kuve nemwenje mwenje iwe waunogona kugadzira kubva kune zvinhu kuImba Depot inozovhenekera yako yese vhidhiyo set. Rumwe ruzivo runotyisa rwunozoita kuti ako mavhidhiyo aite seanotyisa uye nekukupa iwe Edge pane vamwe vashoma vanokanda mamwe mavhidhiyo online.
Iyo refu Muswe ndeyeBlogger Yakanakisa Trafiki Shamwari
Dave Taylor akatsanangura kuti kana iwe ukanyatsogadzira posvo ine zvemukati zvinoda vanhu, iwe unozokohwa hushoma hwemotokari pane iyo positi nekusingaperi mune ramangwana vanhu vachitsvaga zvavanoda.
Pakupedzisira iyo yakareba muswe kusvika kublogging ichagadzira yakawanda yemadiki traffic kudhonza iyo inowedzera kusvika kune imwe yakasimba webhu kuvapo.
Iwe unogona kutsvaga chero chero chinhu online uye uwane imwe yemapeji aDave Taylor kumwe kunhu mumhedzisiro.
Iyo Symphony yeGuru Butt-Kicking
Panzvimbo pekungotora system yeguru imwe chete, ini ndakabatanidza nzira dzakawanda kubva kuChakavanzika Kirasi yekugadzira muchina wekushambadzira waive nesimba kudarika chero varairidzi vangu vega.
Ini ndakatanga nemawebhusaiti matatu ese akagadzirirwa kusimudzira chigadzirwa chimwe chete. Mamwe masayiti anoreva mikana yakawanda yekutsvaga mabara mune yepamusoro gumi mitsva yekutsvaga uye kumanikidza mamwe masayiti kudzika.
Ndakafamba nekukurumidza kuti nzvimbo dzangu dziratidzwe pamberi pekutanga, uye www.nextinternetmillionairedvd.com yaive yangu webhusaiti webhusaiti.
Kutevera rairo yaMarlon, ini ndaifanira kurwisa kushaya simba muYakavanzika Classroom juggernaut. Panzvimbo pekutamba zvakafanana? Ini ndakaisa cookie paPC yako? kutumira mutambo, kwakarwisa Chakavanzika Kirasi pamutengo nekupa kudzoserwa.
Joel arikupa $ 200 yakabatana Commission kune ese Chakavanzika Kirasi seti yandinotengesa, saka ndakapa $ 100 rebate kune chero munhu anotenga kuburikidza nemawebhusaiti angu. Ndiri kureva zvakakomba, kana iwe wanga uchironga pakutenga iyo set zvakadaro, wadii kusevha iyo $ 100, handiti?
Pandakangoziva kuti zita reiyo DVD seti ichave Chakavanzika Kirasi, ini ndakashandisa nzira dzekutanga dzeSEO / SEM kutora # 2 nzvimbo muGoogle kune yangu inoteverainternetmillionairedvd.com webhusaiti.
Tevere ndakashandira coder kuti andigadzirire fomu rekutumira email rakandibvumidza kutora mazita uye email kero pawebhusaiti uye kuzvichengeta mudura. Ini ndakakwanisa kuunganidza pamusoro pe170 inotungamira yevanhu vaifarira mupiro wekudzikisa.
Ini ndakazogadzira 12 Chakavanzika Kirasi yekuenzanisira mavhidhiyo (1 kune mumwe nemumwe murayiridzi) akagadzirwa kubva kumavhidhiyo skrini inotorwa uye odhiyo kubva kune Inotevera Internet Millionaire zvikamu. Ini ndaishandisa maitiro aMike kunyora mazita, tsananguro, ma URL uye ezasi echitatu mameseji aizoita. Ndakaisa izvo kune yega yega vhidhiyo yekugovana saiti pasi pano.
Ini ndakazobata dzinenge dzese dzepamusoro nzvimbo muGoogle, Yahoo, uye Youtube vhidhiyo yekutsvaga kwetemu yakavanzika kirasi. Tevere, yaive nguva yekurwisa Blog Kutsvaga.
Ini ndakatanga kutumira pane yangu blog kakawanda pazuva ndichishandisa raDave Taylor's refu muswe kuraira. Ipo makwikwi angu achitamba makuki ehondo kutyaira traffic kuburikidza nehukama hwavo, ini ndanga ndichiunganidza email kero uye kuvaka hukama
Zvino musi waZvita 5 Joel akadhonza pfuti. Ini email ndakapwanya rondedzero yangu, ndakaburitsa blog posvo, ndakaisa Google Adwords kushambadza, uye ndakadzora yangu post-yekutanga kumhara mapeji.
Kana guruva ragadzikana, ini ndaive mubatanidzwa waJoel # 1 mushure mezuva 1. Ini ndaive nzira yekubuda pamberi paMarlon Sanders pamwe naArmand Morin? ivo chaivo gurus vakandidzidzisa muChakavanzika Kirasi. Vanogona vachiri kuungana kuti vandibate, asi ndipo panopinda chikamu 2!
Ini ndoda kuti undibatsire kupedzisa basa uye kuratidza kuti huwandu hwedzidziso dzeChikoro Dzemukirasi hwakasimba kupfuura chikamu chega chega.
Ndiri kumhanya a kukwikwidza pane yangu blog nemari inodarika $ 1,800 mumari uye mibairo kumusoro kwekubata. Zvese iwe zvunofanirwa kuita kuti uve nepfuti mukuhwina kugadzira posvo, ita komendi, uye wedzera blogroll link.
Tarisa uone kukwikwidza uye undizivise zvaunofunga. Ini ndicha chengeta Doug akatumirwa pane zvandinoita, asi chinangwa changu kupedzisa basa randakatanga muColorado muna Nyamavhuvhu, uye panguva ino ndinofunga Joel achazviona.
Pasi pehutungamiriri hwaThor, Schrock Innovations Computer Company yakavhoterwa Lincoln # s # 1 yakazvimiririra yekugadzirisa makomputa gore rega rega kubva 2001 mumusika une vakwikwidzi vakawanda vane hukasha. Thor akakura Schrock Innovations kubva kumahombekombe ekubhuroka muna 2004 kuita $ 1.5 miriyoni pagore simba imba yebasa muna 2009 nenzvimbo muOmaha neLincoln, NE.
Ndekupi kwandinoisa yangu Corporate Blog?
Jun 26, 2008 pa12: 27AM
$ 200.00? Izvo zvainge zvisina kuita kunge $ 1500 set uye wanga usiri iwe pachirongwa chaicho? Ouch.